“ သင့်လက်ထဲမှာ ငွေ ၅ သိန်းရှိတယ်ဆိုရင် ချစ်သူများနေ့မှာ သင်ဘယ်လိုသုံးမလဲ ”
5 သိန်း အင်း သိတ်တော့ အသုံးမခံလောက်ပါဘူး ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ရှိမဲ့နေရာတစ်ခုကို ချစ်သူကို ချစ်သူထင်မှတ်မထားတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ ချောကလက်ကိတ်လှလှလေးကို ခွဲရင်း နှစ်ယောက်အတူစားမယ် ပြီးရင် ချစ်သူအတွက် ၀ယ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ ပန်းစည်းလှလှလေးနဲ့ လက်စွပ်လေးတစ်ကွင်းကို ချစ်သူအတွက် ချစ်သူများနေ့အမှတ်တယအဖြစ်ပေးလိုက်မယ် ဒီလောက်ဆိုရင် ချစ်သူကျေနပ်လောက်မယ်ထင်တာဘဲလေ
Post By : ချိုတာလေး
၅သိန်းလုံးကိုတော့ မသံုးပစ်ပါဘူး.... ချစ်သူများနေ့ကိုတော့ သူနဲ့ အတူလျှောက်သွားချင်တယ်... ဘာမှမစား ဘယ်မှမသွား ဘာမှမလုပ်ရလဲ သူနဲ့တော့ တစ်နေ့လုံးရှိနေချင်တယ်...........
ချစ်သူမရှိတော့ တစ်ယောက်ထည်း မရောက်ဘူးတဲ့ နေရာဒေသကို သွားပြီး အပန်းဖြေနေပါမယ်ဗျာ။
Post By : သတ်တန့်လေး ခင်ချင်ရင်ဆက်လိုက်ပါ (rainbowhtun2009@gmail.com)အားလုံးကိုခင်ချင်လို့ပါဗျာ။
ထာဝရ ချစ်ရမဲ့ ချစ်သူဆိုရင် တော့ အဲ့ ငါးသိန်းကို ဘယ်လိုသုံးရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတော့ ချစ်သူနဲ့အတူ ရခိုင်မှန့်တီသွားသောက်မယ် ချစ်သူက ချွေးထွက်လာရင် အဲ့ ငါးသိန်း ထဲက ၅ ထောင်တန် တွေနဲ့ ချွေးထိုင် သုပ်ပေးနေမယ်.............ဟား ဟား.....ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ...................
Post By : ကိုဟန်
i want to go to chaungthar with my friends . And i want to buy something for my boyfriend (eg; t-shirt ,.....)
Post By : တစ်ယောက်သောသူကိုချစ်ခွင့်ပန်နေသူ
I will buyaring for my girl friend.
Post By : Myint Myat Thu
Post By : ဟိန်းကျော်
ချစ်သူ မရှိတော့ ဘဏ်မှာဘဲစုထားမယ်လေ။အိုစာမင်းစာပေါ့
thu ko kho pyae mae thu lae pyaw mae lo thim tae bae lo lae chit thu pyaw oo
Post By : kyaw thu soe
သူကိုအရင်မေးမယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။မိန်းကလေးဖြစ်နေပေမဲ့ ကောင်လေးတွေထက်သာတဲ့ပေးဆပ်မှုတွေရှိတယ်။ ဒါကိုသူသိရင်ပျော်ရွင်စေချင်တယ်။:P
Post By : ချူးချူး
chit thu net 1 nay yar yar ko shout lae mae
Post By : lwin mar
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကောင်မလေးနဲံ အတူ ကဖီးဆိုင်တစ်ဆိုင်ထိုင်မယ် သူမျက်ဝန်းလေးကိုငေးကြည့်ပြီးတော့် သူ့ရဲ့လက်ကလေးကို စုတ်ကိုင်ထားမယ် ပီးရင် လက်စွပ်လေးတစ်ကွင်းကိုယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သူု့ကိုဝတ်ပေးမယ် ချစ်သူများနေ့မှာ သူကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းမယ် ............ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တာပါနော် ချစ်သူမရှိတော့် အခက်သားဗျ (ချစ်သူတစ်ယောက်အမြန်အလိုရှိသည်) ........ ဇွဲဆုပိုင်........။
Post By : ဇွဲဆုပိုင် .emopunklay09@gmail.com
ငွေ၅သိန်းကဘာအသုံးခံမှာလဲ။ အိမ်ကနေလမ်းပေါ်ရောက်ရင်ပဲကုန်ပြီ။ ကျွန်တော်ကအသုံးနဲနဲကြမ်းတယ်ခင်ဗျ။ နဲနဲလောက်ထပ်ပေးရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ အမေ့ကိုကူပြောပေးကြပါ.....နော်။
Post By : သူ့လွမ်း
(500000)ks nat ma lout buu.mylover nat pyaw mar pot.ha.....ha...ha
ကိုယ်ကအမြဲတစ်ယောက်တည်းပဲရှိနေပြီပဲ လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့ အစကရှိတဲ့ချစ်သူကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ တစ်ယောက်တည်းလျှောက်သွားမယ် လျှောက်စားမယ် အမေရင်းကိုသွားကြည်.ချင်တယ်
Post By : myatno
5သိန်း သာရှိ မယ် ဆိုရင် တဲခို ခန်း သာသွားမိ မှာ အမှန် ဘဲ..အဲဟုတ်ပါဘူး..ကိုယ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေး ကို သူလိုချင်တာတွေ ၀ယ်ပေးမယ်..သူနဲ့နေရာအနှံရှောက်လည် မယ်...သူ့ စားချင်တာတွေ ၀ယ်ကျွေးမယ်...သူဖြစ်ချင်တာတွေ ကိုဖြေစွမ်း ပေးမယ် ..လို့ စဉ်းစားထား ပါတယ်.....ကောင်းတယ်မလား..
Post By : စိုးမိုးနိုင် ပါ...ခင်မင်ချင်ရင်တော့ onlineking2009 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ..
လျှောက်လည်မယ်ချစ်သူနဲ. ပျော်စရာအကုန်လုပ်မယ်.နေရာဆုံအော်လျှောက်သွားမယ် နောက်ထက်ပဆံရှိရင်ကောင်းတာပေါ့.......
Post By :ိLOVE HERO ,,<အချစ်သူရဲကောင်း>
Post By : ဘ၀သူ၇ဲကောင်း
ငွေ ငါးသိန်းရရင် ချစ်သူ ကိုထားခဲ့ပြီး shopping ထွက်မှာပေါ့ သူ လိုက်ချင်ရင်တော့ခေါ်မယ်လေ လိုချင်တာရှိရင်ဝယ်ပေးမှာပေါ့
Post By : ဇွန်ဇွန်
Post By : စည်သူ@ 4k (သာကေတ)
အဲ့ဒီ ချစ်သူများနေ့ မှာဘောလုံးပွဲရှိမှပိုရင်ခုန်ရမှာ...တစ်ငက်ကိုချစ်သူနဲ့လျှောက်လည်ပြီး တစ်ဝက်ကိုဘောပွဲလောင်းမယ်.....နိုင်ရင်ချစ်သူများနေ့ကို ကိုယ့်ဟာကိုနောက်တစ်ခါကျင်းပမလို့လေ.......
ပိုက်ဆံ၅သိန်းရှိတယ်ဆိုရင် မိဘမဲ.ကျောင်းကိုလှူပစ်မယ် ထားခဲ.တဲ.လူကထားခဲ.ပြီပဲ ချစ်သူများနေ.ကလည်းမရှိတော.ပါဘူး လုပ်စရာတော.မရှိပါဘူး အလှူတွေလုပ်ပစ်မယ်
Post By : ကလေး(thandaraung92@gmail.com)
သူ....လိုအပ်မယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံး...ကိုယ့်မှာရှိသလောက်အကုန်နီးပါး ၀ယ်ပေးဖြစ်မှာပါ....ဖြည့်စည်းပေးရတဲ့အချစ်က....ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိတယ်ထင်လို့ပါ.... ဟုတ်တယ်မလား?...
Post By : Moe Sat
first lover ko 15000, and then second lover ko 15000 kyan ter i thone hmar pauk
Post By : thaw ter
Post By : Twinstar
Post By : စုနှင်းထက်
I will buy presents with 1000 and save the rest
အဲဒီ ၅ သိန်းလေးနဲ့ ကိုကို ဆိကို ရောက်အောင်သွားဇို့ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုရင် ပြေးသွားလိုက်ချင်တယ်....................ကိုကို ကြိုနေပါနော်
Post By : ကြယ်လေး
ငွေ ၅ သိန်းဆိုတာ နည်းနေသလိုပဲ ဒီထက်အများကြီးရှိရင်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက နေခဲ့တဲ့ ရွာငယ်လေးဆီ ပြန်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ပေးချင်တယ်
Post By : မင်းမင်း
Post By : kophyo
အိမ်မှာလိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆည်းပေးချင်တယ်... အဖေနဲ့အမေကိုကျိုက်ထီးရိုးလိုက်ပို့ချင်တယ်... မေတ္တာဝါဒီကျောင်းကမိဘမဲ့ကိုရင်လေးတွေကိုဆွမ်းကပ်ချင်တယ်... ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အရပ်ဒေသတွေမှာစတုဒီသာသွားကျွေးချင်တယ်...
Post By : သဲစု
for me and my lover. want to make something for future.
Post By : minlu aung
Post By : ကြည်စင်
ွှအခုသာ တကယ်အဲဒီပိုက်ဆံတွေရမယ်ဆိုရင် မေကြီးကိုပေးမှာပေါ့
Post By : ဟန်နီချို
Post By : redevil
lover ma shi tot bar lote ka ma l` ma thi woo......................
ငါကတော့..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော၇၇င်...အဲဒီပိုက်ဆံတွေကိုငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ recording လုပ်ဖို့သူတို့နဲ့ဖွင့်ဟတိုင်ပင်လိုက်မယ်...ငါကသူငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုဘာမဆိုပေးဆပ်၇ဲတယ်
Post By : sithu
Pagoda twae,monstic taw ,miba mae gay har twae ko donate pyit mae ............chit thu ma shi taw di lo bar ma ma lote bu...just donate..
Post By : babybird.mdy
chit thu ko khoe pyay mal...
Post By : rainbow
ငွေရှိမှ မဟုတ်ပါဘူး........ချစ်သူများနေ့ မှာ ကိုယ့်သိပ်ချစ်တဲ့ လူသား1ယောက်ပဲိလိုတာပါ..........
အချစ်ကို ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်လို့ရမယ်ဆိုရင် သူ့အချစ်တွေကို ၀ယ်ချင်တယ်....
၅သိန်းတောင်မှအလကားရမှာလား။အယ်.....ရည်းစားလည်းမရှိဘူး...အဲဒါမှကွိုင်ပဲ.....။ဒါဆိုရင် ကြော်ငြာဘုတ် အရင်ထောင်ရမယ်။ခုနစ်ရက်အတွင်း ရည်းစားအမြန် အလိုရှိနေသည် လို့....။အော် ငါ့နှယ်...သနားစရာပါလား။
CHIT MA SHI TOT ONLY ONE GO YA MHR POP FRI TAY NA`. KA YEE TWR PYI MAY CHAW TAR KO POP HEE HEE :) DAR PIN MA`. MONEY KA WHERE MHR LA`
Post By : moonsun89
CHIT THU MA SHI TAW FRI TWAE NA` SHOUT TWAE MAL FRI TWAE KO SPONSER KHAN MAL P TAW PAGODA MHAR DONATE LOADE MALDAR PAY MA` DI YAT PINE MHAR CHIT THU YA YIN TAW MA PWAY TAP BOO NAW
Post By : KHWARNYO
အင်း.....ပထမဆုံး ၁သိန်းနဲ့ ချစ်သူငှားမယ်လေ (စိတ်ဝင်စားသူများဆက်သွယ်ပါ။ မှတ်ချက်။ ။ကောင်မလေးချောချောများသာ) နောက်၂ သိန်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြင်ဆင်မယ်။ နောက်ထပ် ၁ သိန်းက သုံးဖို့စွဲဖို့.... နောက် ၁ သိန်းက သူငယ်ချင်းအတွဲတွေနဲ့သုံးဖို့... နောက် ၁ သိန်းက အီစီကလီတွေကို လက်ဆောင်ပေးမယ်။ အင်း ဖုန်းလည်းပြောမှာ ဆိုတော့...ဘေလ်လာရင်ရှင်းဖို့ ၁ သိန်းချန်မယ်... ပေါင်းကြည့်လိုက်တာ ၇သိန်းတောင်ဖြစ်သွားပြီ ၂ သိန်းလောက်ရှိသေးရင် ပေးကြပါဦးလား...
Post By : 9one
ဘာလုပ်၇င်ကောင်းမလဲ....? ချစ်သူလိုချင်တာတွေဝယ်ပေးရမှာပေါ့... ချစ်သူဖြစ်ချင်တာတွေလုပ်ပေးမယ်..... ဒါပေမဲ့.. ချစ်သူမရှိသေးတော့..အင်း ကိုယ်စားချင်တာပဲ..၀ယ်စားတော့မယ် ဟဲ..ဟဲ ချစ်သူရရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့..!
Post By : ဖြိုး
ပေါင်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုအရင်ရွေးရမယ်ပြီးမှ အရင်ဆုံးရည်စားဦးကိုတော့အနမ်းပေးမယ် ခုတွဲနေတဲ့လူကိုတော့T.SHIRT ဝယ်ပေးမယ် ပြီးတော့မုန့်သွားစားမယ်
Post By : ချိုဝမ်မဟုတ်တဲ့[
ဘုရားမှာလှုမယ်။ လုပ်ချင်တာတွေအားလုံးလျှောက်လုပ်မယ်။ ချစ်သူလက်ကိုတွဲပြီးလမ်းလျှောက်မယ်။မုန့်တွေဝယ်စားမယ်။ လျှောက်ကစားမယ်။ ပစ္စည်းတွေလျှောက်ဝယ်မယ်။ အဲ့လောက်ဆိုကုန်ပြီလား မကုန်သေးရင်........ အော်...သိပြီ အင်္ကျီဆင်တူဝယ်ဝတ်မယ်။ fashion ဆင်တူဝတ်မယ်။ တော်ပြီပေါ့။ နောက်ပြီး အပျော်စီးသဘောင်္ သွားစီးမယ်။ ချစ်သူနဲ့ ညရှုခင်းကိုခံစားမယ်။ ပြန်ရင်တက္ကစီငှားပြန်မယ်။ အမေ့အတွက်ပါမုန့်ဝယ်သွားမယ်။
Post By : ကောင်းငယ်လေး
Post By : ttmyat
အင်း..ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်။ ချစ်သူကလည်းမရှိတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲ ပျော်ရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူရှိလာခဲ့ရင်တော့ မုန့်စားမယ်။ ကစားမယ်။ စိမ်းလန်းစို ပြေလိုနေရာမျိူးသွားပြီး သူ့မျက်နှာလေးကို တစိမ့်စိမ့်ထိုင်ကြည့်မယ်။ ထိုင်ကြည့်ချင်စရာရုပ်ကလေးတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်။ ဥပမာ ကိုကောင်းမြတ် လိုရုပ်မျိုးလေးပေါ့နော်။ အဲ့လောက်ဆိုရင်5သိန်းမရှိလည်းဖြစ်တယ် သိလား
bar lote loe ya mahar le?
Post By : morning sun
Post By : pooh
thu ko lae ma call pae 1youk hte moke tawer sar mal. ma good bu lar. ok.
ချောင်းသာ ကိုသွားမယ် ချစ်သူများနေ့ကို အပျော်ရွှင်ဆုံးဖြတ်သန်းမယ် အိမ်က ပိုက်ဆံတောင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ချစ်သူလဲ စိတ်ချမ်းသာမှာပါ
Post By : ကာရန်
ချစ်တဲ့သူကို ပလက်တီနမ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ စိန်လက်စွပ်ဝယ်ပေးလိုက်မှာပေါ့